WhatsApp horeyba wuu kuu ogolaanayaa inaad ka fogaato in lagugu daro koox ogolaansho la'aan | Androidsis
WhatsApp horeyba wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka hortagto in lagu daro kooxaha ogolaansho la'aan
Muddo toddobaadyo ah WhatsApp ayaa soo bandhigtay shaqo daneyn weyn u leh isticmaaleyaasha. Codsigu wuxuu na siinayaa fursad aan ku dooranno waa tee dadka ay awoodaan inay nagu daraan kooxaha iyo kuwa aan ahayn. Waddo looga fogaado dhibaatooyinka kooxaha, taas oo iyaduna ka dhalatay dhibaatada taas waxaa dhowaanahan la joogay kooxo ku jira arjiga farriinta.
Hawshan waxaa markii hore laga bilaabay Hindiya, oo ah suuq ay WhatsApp ku tijaabiso shaqooyin badan oo ay qabato. Muuqaalkan ayaa ugu dambeyntii loo siidaayaa qof walba. Dhammaan dadka isticmaala barnaamijka farriinta caanka ah horeba waxay uga heli karaan taleefannadooda.
Dhamaadkii Oktoobar, waxaa la bilaabay in la geeyo, inkasta oo ay xadidan tahay, adduunka oo dhan. Waa hadda markay u muuqato in isticmaaleyaasha adduunka oo idil ee WhatsApp ku jira taleefankooda ku raaxaysan karaan shaqadan hadda. Waxay awood u yeelan doonaan inay go'aansadaan dadka ay suurtogal u tahay inay ku daraan koox iyo kuwa aan ku darin.
Toddobaadkii hore waxaan horeyba kuu tusnay habka ay tahay waxaan ku habeyn karnaa shaqadan barnaamijka dirista. Markaa waxaad awood u yeelan doontaa marwalba dadka haysta suurtagalnimada in aan kugu casuumayo koox iyo kuwa aan ku casuumin. Wax runtii iska ilaalin kara dhibaatooyin badan.
Qaar badan ayaa sugayay bandhiggan. Maaddaama aan dhammaanteen haysanno qof WhatsApp-ka ah oo na siinaya koox aan ogeysiis hore lahayn. Hawshan cusubi waa hab wanaagsan oo looga hortago inay taasi dhacdo oo cidina nama gelin karto ogolaansho la'aan koox ku jirta arjiga.
Haddii aad rabto inaad ku isticmaasho shaqadan WhatsApp, waa mid aad u fudud, gudaha nidaamka dalabka qaybta asturnaanta waa macquul. Halkaas waxaan ku haynaa qaybta kooxaha, halkaas oo aan ku habeyn karno tan. Marka ha ka waaban inaad wax ka beddesho goobahan si aad u jeceshahay, oo markaa uga faa'iideyso shaqada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » WhatsApp horeyba wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka hortagto in lagu daro kooxaha ogolaansho la'aan